ချစ်သူနှစ်ဦး ‌ရွှေလက်‌တွဲ၊ တူယှဉ်‌နွှဲကာ မသွားသင့်‌‌တဲ့ ‌နေရာ(၄)နေရာ - APANNPYAY
/ ချစ်သူနှစ်ဦး ‌ရွှေလက်‌တွဲ၊ တူယှဉ်‌နွှဲကာ မသွားသင့်‌‌တဲ့ ‌နေရာ(၄)နေရာ
ချစ်သူနှစ်ဦး ‌ရွှေလက်‌တွဲ၊ တူယှဉ်‌နွှဲကာ မသွားသင့်‌‌တဲ့ ‌နေရာ(၄)နေရာ
ပုဝါပါးနဲ့ ကြက်‌သားထုပ်‌‌တော့ စွန်းတတ်‌တယ်‌။ တစ်‌ရွာသားနဲ့ ရည်းစားလုပ်‌‌တော့ လွမ်းတတ်‌တယ်‌။` ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကား‌လေးကို ဖတ်‌မိ‌တဲ့အခါ ‌ရှေးယခင်‌က လမ်းပန်းဆက်‌သွယ်‌‌ရေး ခက်‌ခဲမှုအ‌ကြောင်း တ‌စေ့တ‌စောင်းကို မြင်‌‌ယောင်‌မိပါတယ်။ ယခုအချိန်အခါမှာတော့ ‌ပြောင်းလဲလာ‌တဲ့ ‌ခေတ်‌စနစ်‌နှင့်‌အညီ လမ်းပန်းဆက်‌သွယ်‌သွားလာ‌ရေးမှာ အဆင်‌‌ပြေလွယ်‌ကူလာခဲ့ပါပြီ ။ ပြည်‌တွင်းခရီးစဉ်‌ သာမက ပြည်‌ပခရီးစဉ်‌ပါ သက်‌‌တောင့်‌သက်‌သာ လွယ်‌ကူစွာ သွားလာနိုင်‌ပြီဖြစ်‌ပါတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် ခရီးသွားလာခြင်းကို ၀ါသနာထုံသူတွေအဖို့ အချိန်‌ရာသီမ‌ရွေး သွားလာလည်‌ပတ်‌နိုင်‌ကြပြီပေါ့ ။ လွန်‌ခဲ့‌သော အပတ်‌က ကျွန်‌မ အစ်‌ကိုနဲ့ အစ်‌မ မိသားစုက သူတို့နဲ့ပြင်‌ဦးလွင်‌ကို ခရီးထွက်‌ဖို့ ခေါ်ခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်‌မက အလုပ်‌တစ်‌ဖက်‌ဖြစ်‌‌နေတာကြောင့် ခွင့်‌ရက်‌ရှည်‌ ယူဖို့မလွယ်‌တဲ့အတွက် လိုက်မသွားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်‌မ အစ်‌ကိုတို့က‌တော့ ခရီးစဉ်‌အ‌ကြောင်း ၀မ်းသာအားရ အစီစဉ်‌ဆွဲ‌နေကြတာပေါ့လေ။ ပြင်‌ဦးလွင်‌မှာ ‌လေးရက်‌‌လောက်‌‌နေပြီး အပြန်‌မှာ မန္တ‌လေးသို့ ၀င်‌ကာ လည်‌ပတ်‌မယ့် အ‌ကြောင်းလည်း ပြောကြသေးတာ ။ မန္တ‌လေးလို့ဆိုမှ ကျွန်‌မ တစ်‌ခုသွားသတိရမိတာက မန္တ‌လေး ‌ရွှေစာရံဘုရား‌ဘေးက နား‌တောင်းကျ‌ချောင်း။ အဲ့ဒီချာင်းအနီးမှာ စောမွန်‌လှ ရင်‌ကွဲကျပြီး သေဆုံးခဲ့တာကြောင့် အဲ့ဒီနေရာကို ချစ်‌သူစုံတွဲတွေ အတူတကွ သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ကွဲတတ်‌တယ်လို့ ရှေးလူကြီးတွေက ‌ပြောတာမှတ်သားခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့နေရာလိုပဲ အခြား‌နေရာများတွေလည်း ရှိပါ‌သေးတယ်။
၁. ပန်‌ထွာမင်းသမီးရဲ့ ဗိသန်ိုးမြို့‌ဟေါင်းတစ်‌‌နေရာ။
၂.လွိုင်‌‌ကော်‌မြို့ ‌တောင်‌ကွဲ‌တောင်‌‌ပေါ် ။
၃.သန်‌လျင်‌မြို့က ရှင်‌‌မွေ့နွမ်းကုန်းနှင့်‌ လွမ်း‌စေတီဘုရား‌ဘေး။
၄.သုဝဏ္ဏဘူမိ သထုံမြို့‌ဟောင်း မြို့‌တော်‌၀န်ရဲ့သမီးက မိမိ၏ချစ်‌သူ လူစွမ်း‌ကောင်းဗျက်‌၀ိအား အထင်‌မှားကာ ကွမ်းတစ်‌ယာ‌ရေတစ်‌မှုတ်‌‌ပေးပြီး ကားစင်‌ဓားတင်‌ သတ်‌ခဲ့ရာ လူသတ်‌ကုန်း ။
အစရှိ‌တဲ့နေရာတွေကလည်း ‌ ချစ်‌သူနှစ်‌ဦးအတူတကွ မသွားသင့်‌‌တဲ့နေရာတွေ ဖြစ်တယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်။ ဒီနေရာများကို ချစ်သူနဲ့ အတူတကွ သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ရှင်‌ကွဲ‌သော်‌လည်း‌ကောင်း ‌သေကွဲ‌သော်‌လည်း‌ကောင်း ကွဲရတတ်‌လို့ ဆိုကြပါတယ် ။
'ပိ‌ရေဟိ ၀်ိပ္ပ‌ယော‌ဂေါ ဒု‌က္ခော '
'ချစ်‌ခင်‌နှစ်‌သက်‌‌သော သတ္တ၀ါ သင်္ခာရတို့နှင့်‌ ‌ကင်းကွာဖဲကြဉ်‌ မ‌ပေါင်းယှဉ်‌ရခြင်းသည်‌ ဒုက္ခမည်‌ပါ‌ပေ၏' လို့ ဓမ္မစကြာတရား‌တော်‌မှာ ပါရှိသည့်‌အတိုင်း ပုထုဇဉ်‌ ဟူသမျှဟာ မိမိချစ်‌မြတ်‌နိုး‌သူတွေနဲ့ မခွဲခွာလိုကြတာဟာ သဘာဝပင်‌ဖြစ်‌ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့်ဘာရယ်‌မဟုတ်‌‌သော အ‌သေးအဖွဲ့ကိစ္စ‌လေးများကအစ သတိပြုသင့်‌တယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆတာကြောင့် ခုလိုရေးသားလိုက်ရခြင်းပါ။
ပုဝါပါးနဲ့ ကွကျ‌သားထုပျ‌‌တော့ စှနျးတတျ‌တယျ‌။ တဈ‌ရှာသားနဲ့ ရညျးစားလုပျ‌‌တော့ လှမျးတတျ‌တယျ‌။` ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကား‌လေးကို ဖတျ‌မိ‌တဲ့အခါ ‌ရှေးယခငျ‌က လမျးပနျးဆကျ‌သှယျ‌‌ရေး ခကျ‌ခဲမှုအ‌ကွောငျး တ‌စတေ့‌စောငျးကို မွငျ‌‌ယောငျ‌မိပါတယျ။ ယခုအခြိနျအခါမှာတော့ ‌ပွောငျးလဲလာ‌တဲ့ ‌ခတျေ‌စနဈ‌နှငျ့‌အညီ လမျးပနျးဆကျ‌သှယျ‌သှားလာ‌ရေးမှာ အဆငျ‌‌ပွလှေယျ‌ကူလာခဲ့ပါပွီ ။ ပွညျ‌တှငျးခရီးစဉျ‌ သာမက ပွညျ‌ပခရီးစဉျ‌ပါ သကျ‌‌တောငျ့‌သကျ‌သာ လှယျ‌ကူစှာ သှားလာနိုငျ‌ပွီဖွဈ‌ပါတယျ။
အဲ့ဒါကွောငျ့ ခရီးသှားလာခွငျးကို ဝါသနာထုံသူတှအေဖို့ အခြိနျ‌ရာသီမ‌ရှေး သှားလာလညျ‌ပတျ‌နိုငျ‌ကွပွီပေါ့ ။ လှနျ‌ခဲ့‌သော အပတျ‌က ကြှနျ‌မ အဈ‌ကိုနဲ့ အဈ‌မ မိသားစုက သူတို့နဲ့ပွငျ‌ဦးလှငျ‌ကို ခရီးထှကျ‌ဖို့ ချေါခဲ့ပါတယျ ။ ကြှနျ‌မက အလုပျ‌တဈ‌ဖကျ‌ဖွဈ‌‌နတောကွောငျ့ ခှငျ့‌ရကျ‌ရှညျ‌ ယူဖို့မလှယျ‌တဲ့အတှကျ လိုကျမသှားဖွဈခဲ့ပါဘူး။ ကြှနျ‌မ အဈ‌ကိုတို့က‌တော့ ခရီးစဉျ‌အ‌ကွောငျး ဝမျးသာအားရ အစီစဉျ‌ဆှဲ‌နကွေတာပေါ့လေ။ ပွငျ‌ဦးလှငျ‌မှာ ‌လေးရကျ‌‌လောကျ‌‌နပွေီး အပွနျ‌မှာ မန်တ‌လေးသို့ ဝငျ‌ကာ လညျ‌ပတျ‌မယျ့ အ‌ကွောငျးလညျး ပွောကွသေးတာ ။ မန်တ‌လေးလို့ဆိုမှ ကြှနျ‌မ တဈ‌ခုသှားသတိရမိတာက မန်တ‌လေး ‌ရှစောရံဘုရား‌ဘေးက နား‌တောငျးကြ‌ခြောငျး။ အဲ့ဒီခြာငျးအနီးမှာ စောမှနျ‌လှ ရငျ‌ကှဲကပြွီး သဆေုံးခဲ့တာကွောငျ့ အဲ့ဒီနရောကို ခဈြ‌သူစုံတှဲတှေ အတူတကှ သှားခဲ့မယျဆိုရငျ ကှဲတတျ‌တယျလို့ ရှေးလူကွီးတှကေ ‌ပွောတာမှတျသားခဲ့ဖူးပါတယျ။ အဲ့နရောလိုပဲ အခွား‌နရောမြားတှလေညျး ရှိပါ‌သေးတယျ။
၁. ပနျ‌ထှာမငျးသမီးရဲ့ ဗိသနိုးမွို့‌ဟေါငျးတဈ‌‌နရော။
၂.လှိုငျ‌‌ကျော‌မွို့ ‌တောငျ‌ကှဲ‌တောငျ‌‌ပျေါ ။
၃.သနျ‌လငျြ‌မွို့က ရှငျ‌‌မှနှေ့မျးကုနျးနှငျ့‌ လှမျး‌စတေီဘုရား‌ဘေး။
၄.သုဝဏ်ဏဘူမိ သထုံမွို့‌ဟောငျး မွို့‌တျော‌ဝနျရဲ့သမီးက မိမိ၏ခဈြ‌သူ လူစှမျး‌ကောငျးဗကျြ‌ဝိအား အထငျ‌မှားကာ ကှမျးတဈ‌ယာ‌ရတေဈ‌မှုတျ‌‌ပေးပွီး ကားစငျ‌ဓားတငျ‌ သတျ‌ခဲ့ရာ လူသတျ‌ကုနျး ။
အစရှိ‌တဲ့နရောတှကေလညျး ‌ ခဈြ‌သူနှဈ‌ဦးအတူတကှ မသှားသငျ့‌‌တဲ့နရောတှေ ဖွဈတယျလို့ကွားဖူးပါတယျ။ ဒီနရောမြားကို ခဈြသူနဲ့ အတူတကှ သှားခဲ့မယျဆိုရငျ ရှငျ‌ကှဲ‌သျော‌လညျး‌ကောငျး ‌သကှေဲ‌သျော‌လညျး‌ကောငျး ကှဲရတတျ‌လို့ ဆိုကွပါတယျ ။
'ပိ‌ရဟေိ ဝိပ်ပ‌ယော‌ဂေါ ဒု‌က်ခော '
'ခဈြ‌ခငျ‌နှဈ‌သကျ‌‌သော သတ်တဝါ သင်ျခာရတို့နှငျ့‌ ‌ကငျးကှာဖဲကွဉျ‌ မ‌ပေါငျးယှဉျ‌ရခွငျးသညျ‌ ဒုက်ခမညျ‌ပါ‌ပေ၏' လို့ ဓမ်မစကွာတရား‌တျော‌မှာ ပါရှိသညျ့‌အတိုငျး ပုထုဇဉျ‌ ဟူသမြှဟာ မိမိခဈြ‌မွတျ‌နိုး‌သူတှနေဲ့ မခှဲခှာလိုကွတာဟာ သဘာဝပငျ‌ဖွဈ‌ပါတယျ ။ ဒါ့ကွောငျ့ဘာရယျ‌မဟုတျ‌‌သော အ‌သေးအဖှဲ့ကိစ်စ‌လေးမြားကအစ သတိပွုသငျ့‌တယျလို့ ထငျမွငျယူဆတာကွောငျ့ ခုလိုရေးသားလိုကျရခွငျးပါ။